Windows 8,Office 2010,2013 တွေ Activate မဖြစ်သေးဘူးလား ???? (KMSAuto v2.23 Portable) ~ online ချစ်သူ (နည်းပညာ နှင့် သတင်း)
Windows 8,Office 2010,2013 တွေ Activate မဖြစ်သေးဘူးလား ???? (KMSAuto v2.23 Portable)
00:40 lwanthumyotaw No comments
Pyae Phyo Wai: Micrisoft Office 2013 မှာ Activate မဖြစ်သေးဘူး Key လဲထည့်ပေးတယ် ဒါပေမယ့် သူကထပ်တောင်းတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတစ်ချက် ကူညီပေးချင်စေပါတယ်ခင်ဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
ဒါလေးကို ဒေါင်းယူပြီး Rar ဖိုင်လ်ကို ဖြည်ပါ... KMSAuto.exe ကို Right Click >> Run as administrator နဲ့ Run ပေးပါ... Enter Command ကတဆင့် A ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ... နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ Box မှာ မိမိ Activate လုပ်ချင်တဲ့ Window (or) Office ကိုရွေးပြီး W> (or) O> ကိုနှိပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ.... ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ Window 8,7,Office 2010,2013 ဟာ အလိုလျောက် Activated ဖြစ်သွားစေမှာပါ... အဆင်ပြေပါစေ.....:)
Windows 8,Office 2010,2013 Activator
You just download the rar file and open the file and run as administrator Enjoy !!!!!
Posted in: နည်းပညာ, နည်းလမ်းများ